Faah faahin dheeraad ah oo kasoo baxaysa qarax aad u xoogan oo maanta ka dhacay Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin dheeraad ah oo kasoo baxaysa qarax aad u xoogan oo maanta ka dhacay Muqdisho (SAWIRO)
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa qarax aad u xoogan oo duhurnimadii maanta ka dhacay wadada Makka Al-mukarrama ee magaalada Muqdisho, kaas oo sida la sheegay ahaa miino lagu soo dhajiyay gaari noociisu yahay SURF.
Gaariga qaraxa lagu soo dhajiyay ayaa qarxay xili uu maraayay agagaarka saldhiga degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho, waxaana markaasi kadib gaarigaasi qabsaday dab aad u xoogan oo gabi ahaan bas-beeliyay.
Inkastoo aysan jirin qasaaare saas u weyn uu geystay qaraxaasi ayaa hadane waxaa jiro dhaawac soo gaaray 2 qof oo shacab ah iyo sidoo kale ninkii gaariga watay, waxaana goobtaasi ku bas-beelay gaariga oo dabka si xoogan ugu faafay.
Waxaa goobta uu qaraxa ka dhacay islamarkiiba soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka, kuwaas oo xiray guud ahaan goobtii uu qaraxa ka dhacay.
Gaadiidka dab-damiska ee maamulka gobolka Banaadir ayaa markii dambe ku guuleystay inuu damiyo dabkaasi, waxaana muddo saacado ah hakad ku yimid isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee halkaasi ka jiray.
Dhinaca kale, taliyaha booliiska gobolka Banaadir Bishaar Abshir Geedi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in qaraxa uu haleelay gaari uu la socday ganacsade Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Xuseen Jaamici, wuxuuna taliyaha sidoo kale sheegay in qaraxaasi uu ka bad-baaday ninkaasi ganacsadaha ah.
Inkastoo taliyaha uu sheegay inaysan jirin wax qasaare uu geystay qaraxaasi, ayaa hadane dad goob-joogayaal ah oo warbaahinta Bulshoweyn la hadlay waxay sheegayaan in qaraxaasi ay ku dhaawacantay ilaa seddax qof uu mid ka mid ah ahaa darawalkii gaariga waday.
Si kastaba ha ahaatee, qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho islamarkaana lagu soo xiro gaadiidka ayaa ah kuwa aanay inta badan geysan qasaare sidaas u weyn, marka laga reebo in waxyeelo dhimasho ama dhaawac kasoo gaarto dadka xilligaasi saaran gaadiidkaas.